အဝေးရောက်"ဘဝ"....! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော့်အကိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဒူဘိုင်းရောက် ခံစားချက် ကဗျာလေးပါ...မှားတာများရှိရင်လည်း ဝေဖန်အကြံပြုနိုင်ပါတယ်...!
ဓါတ်ပုံအား Google မှကူးယူးထားပါသည်...
ံ စုကာဆောင်း၍ အဆင်ပြေကြောင်း
အဏ္ဏဝါ(သင်္ချာ-ပြွန်တန်ဆာ) ပျော်ရွှင်ခြင်းများဖြင့်ပြည့်စုံပါစေ...! လေးစားလျှက်*****အိမ်လွမ်းသူ
1 Response to အဝေးရောက်"ဘဝ"....!